hadallo qawan iyo masuul umaded wax meesha yaalley ma ahayn. by mohamed (Hadhwanaagnews) Saturday, July 14, 2012 marka hore salaan yaan udirayaa bahwaynta reer somaliland meel kasta oo ay ka joogaan caalamka, the second.
marka hore salaan yaan udirayaa bahwaynta reer somaliland meel kasta oo ay ka joogaan caalamka, the second.
waxaan salaamayaa websitekan hadhwanaagnews oo runtii role muhiim ah ka qata wacyigalinta umada reer somaliland iyo umadaha kale oo ku hadla afsomaliga.
in taa ka dib waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar ka idhaahdo erayadii qaawanaa ee madaxweynaha ka soo yeeray,
oki marka hore anigoo ka mid jaaliyada reer somaliland ee dalka kuwait dagan runtiina websitkani aan ulasocdo taako taako wararkiisa iyo barnaamujyadiisa quality ga leh. hadana aan ku dheerayn inaan maqaalo ka qoro arimaha siyaada reer somaliland ayaa waxa igu dhashay inaan bal fikirkayga ku adan ka dhiibto markaa
aan usoo daadego dulucda.
walal marka hore waan ka xumahay runtii arimaha foosha xun leh ee ku dhacay dadka reer somaliland anigu runtii markaan maqlay waan uqaadan waayay waxa uu ku hadlaayo madaxwaynihii dhamaa ee umadu soo dooratay
oo ah wax laga fiirsado waayo si kastaba hadii loo caayo inuu ka aamuso ayaa uun ay ahayd waayo waata layidhi nin cadhooday laga badi
ta kale waa masuul dhan. taasi waxay ahayd dareenkayga markaasi hadii aynu eegno tii rayaale runtii geesi buu ahaa waxaasoo kalana way ku dhaceen iyo qaar ka daran kiii masaxana waa uu ahaa waan ku hambalyaynaya runtii rayaale.
een ta kale umada aad hogaaminayso ku hogaami hubsiimo iyo deganaansho si wayn loo baaran dego ee maaaha in inta saqda dhexe ee habeenkii lagu toosiyo oo aad si yar oo fudud uga jawaabto, hadladaas oo kale runtii waxay dhaawac wayn ugaysanayan kalsoonidii umadu ku siisay kaala noqonayaan.
1=Shacabka reer somaliland midaan leeyay:
2=youthkana midban leeyay:
shacabka reer somaliland waxaaan leeyay isku duubnaada oo ahaada ul iyo diirkeed any siyaasi kasta waxuu doono ha sameeyo hadii uu yahay mucaarad iyo muxaafadba, laaakiin kii kii danta shacabka iyo dalka ka shaqaaynaaya naftiisa uhuraaya j.somaliland oo 50 kun in ka badan ugu dhinteen una hureen naftoodii sidii ay xorriyad uheli lahaayen taama, tiina waan haysana maaanta alhamdulilaah, taaa yaan la illaawin. so wax lagu ciyaaro maaha.
Ta kale waxa weeye waar shacabka reer somalilaand ow ha la joojiyo shir beeledyada illayn waa aynu ka gudubnee oo aynu ugudubnay demiqraadiayad, xitaa hadaad sheeganaysid inaad ka hadlaysa wax deegaankaaga dan uah dee adeer maaha ma taallo meesha inad isu qaylo dhaan dirataan oo magac kaliya ah, waayo hadii ay noqoto caynkaa wax baa ku lamman ee si aanay unoqon inad isu magac yeeratan dee deegaakad degantay waa lagula daganyay ee kuwaaba ha ka qaybgalaan shirkaaga iyo wanaaga aad uwado deegaankaaga se haw magac kalia hadii aanay baroortu orgiga kawaynayn...
Ta youthka walal waxaan idin leeyay anigoo idin jecel marka wadan ama dal ubadkiisu la arko sida ay yiihin iyo inay isbedel samaynayaan ayaa laga cabiri karaa wadankas future fiicanbuu haystaa markaa waxaan leeyay aan ku dadaalo dadal ah in aynu wax ugu qabano dalkeena waalidiinteena inagu tabcay oo think ka yeellano siidii ay wax change garoowi laahayen. aynaan laakin wax siyada aynaan gelin inta ka horaysa ee ku jirno wax barashadeena iyo any faaido kasta waan idin salamay your sincerely mohamed email= max.ed@hotmail.com